ESP32-CAM: ihe ị kwesịrị ịma gbasara usoro a | Akụrụngwa n'efu
ESP32-CAM: ihe ị kwesịrị ịma gbasara usoro a
Isaac | | Arduino, Ihe eletrọniki
Anyị na-ama bipụtara banyere WiFi modul na Arduino ọzọ oge, ma nke ugbu a ọ bụ banyere modul ESP32-UM, modul WiFi ESP32 na obere igwefoto vidiyo. Nke a na-enye ohere ọrụ ọhụụ, dịka onyunyo ma ọ bụ nledo dịpụrụ adịpụ, na-ejide ihe niile na-eme mgbe ị na-anọghị ebe ahụ ma na-eziga ya na ngwaọrụ ọ bụla maka ịdekọ ma ọ bụ nwee ike ịhụ n'ime.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile e kwuru maka modul WiFi nke anyị tụlererịrị, ga-adị ire maka nke a, naanị na ọ nwere obere obere ihe dị iche na mgbakwunye na igwefoto agbakwunyere. Mana ihe niile ịchọrọ ịma na anyị ga-egosi gị na ntuziaka a ...
1 Kedu ihe bụ ESP32-CAM?
1.1 Zụta otu
1.2 Njirimara teknụzụ nke ESP32-CAM (datasheet)
2 Mmekọrịta na Arduino IDE
Kedu ihe bụ ESP32-CAM?
El ESP32-UM Ọ bụ modul ị nwere ike iji ọtụtụ ọrụ rụọ yana Arduino. Ọ bụ modulu zuru oke na microcontroller ejiri, nke nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ n'adabereghị. Na mgbakwunye na njikọta WiFi + na Bluetooth, modul a nwekwara igwefoto vidiyo agbakwunyere, yana oghere microSD maka nchekwa.
Mọdụl a adịghị ọnụ ma ọlị, ma ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ngwa. Site na IoT dị mfe, gaa na ndị ọzọ dị elu maka nlekota onyonyo na mmata site na iji AI, ọbụnadị dị ka usoro onyunyo iji chọpụta ihe na-eme n'otu ebe ebe ọ bụla ị nọ ...
Modul ESP32-CAM adịghị ọnụ ma ọlị, dịka m kwuru, maka euro ole na ole ị nwere ike ịnwe. You nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa pụrụ iche ma ọ bụ na Amazon. Iji maa atụ, lee ụfọdụ aro na ezigbo ego:
Abụọ ESP32-CAM abụọ iji gbagoo ihe onyunyo onyunyo.
ESP32-CAM na mpi 8 dBi dual-band na eriri maka oke mkpuchi.
Ọ bụrụ n’inweela modulu ESP32 ma chọọ igwefoto, ị nwere ike zuta ya iche.
Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ya zuru ezu na-arụ ọrụ na USB: ESP32-CAM + FTDI modul.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ọnụ ...
Njirimara teknụzụ nke ESP32-CAM (datasheet)
ESP32-CAM modul nwere ụfọdụ njikwa teknụzụ -akpali nnọọ mmasị na ị pụrụ ịhụ na akwụkwọ data emeputa. N'ebe a, m na-achikọta ndị kachasị mkpa:
Njikọ: WiFi 802.11b / g / n + Bluetooth 4.2 na LEcha. Na-akwado bulite onyonyo site na WiFi.
NjikọUART, SPI, I2Cma PWM. Ọ nwere 9 GPIO atụdo.
Oge elekere: ruo 160Mhz.
Microcontroller Mgbakọ ike: ruo 600 DMIPS.
Nchekwa: 520KB nke SRAM + 4MB nke oghere kaadi PSRAM + SD
Mkponyeaka: nwere otutu usoro ihi ụra, ngwa ngwa kwalite site na OTA, na LEDs maka iji ya rụọ ebe nchekwa ọkụ.
Igwefoto: Na-akwado igwefoto OV2640 nke nwere ike ịbata na mkpọ ma ọ bụ zụta ya n'adabereghị. Typesdị kamera ndị a nwere:
2 MP na ihe mmetụta gị
1622 × 1200 px UXGA nhazi usoro
Mmepụta usoro YUV422, YUV420, RGB565, RGB555 na 8-bit data compression.
Nwere ike ịnyefe onyonyo n'etiti 15 na 60 Fps.
El ịka nke ESP32-CAM dị mfe, dịka ị pụrụ ịhụ na eserese gara aga. Ejiri igwefoto jikọọ na njikọta nke enyere ya aka. Mgbe ahụ, site na ihe atụ nke Arduino, ị ga-aghọtakwu otu esi ejikọ ya na ihe nke ọ bụla bụ, n'agbanyeghị na ịnwere ike ịnweta otu echiche.
Site n'ụzọ, ọ bụ ezie na ọ pụtaghị na oyiyi ahụ, ha na-enwekarị njikọ gburugburu na PCB nke a na-eji iji jikọọ eriri antenna ndị ọzọ na ụfọdụ. Ọ na-abụkarị nke na-esote mpempe akwụkwọ nke oghere SD.
Nwere ike iji a FTDI mpụga nkwụnye ijikọ modul a ma mee ka ọ dịrị gị mfe ijikwa ya. Nke a na - enye ohere iji ụdị ọdụ ụgbọ mmiri miniUSB kama ịkwụnye ESP32-CAM. Iji jiri otu modulu ndị a, ị nwere ike jikọọ ya dị ka nke a:
Hazi modul FTDI ka ọ rụọ ọrụ na 3.3v.
Jipu ihe GPIO pin 0 na GND nke modul ESP32-CAM.
The 3v3 pin nke modul ga-jikọọ Vcc nke FTDI.
GPIO 3 (UOR) nke modul ahụ ga-aga TX nke FTDI.
GPIO 1 (U0T) nke modul na-aga RX nke FTDI.
Na GND nke ESP32-CAM na GND nke FTDI modul.
Ugbu a ị nwere otu USB ụdị interface, nke nwere ike ikwado njikọ nke ọrụ gị ...
Mmekọrịta na Arduino IDE
Iji nwee ike iwekota na FTDI, njikọ ahụ dị nnọọ mfe. Justkwesịrị ịme ihe ndị a:
Jikọọ njikọ 5v nke modulu ESP32-CAM na Vcc nke modul FTDI.
Jikọọ GND nke modulu ESP32-CAM na GND nke modul FTDI.
TX0 site na bọọdụ FTDI na-aga GPIO 3 (U0RXD).
RXI site na FTDI osisi na-aga GPIO 1 (U0TXD).
Na gafere GPI0 na GND nke bọọdụ ESP32-CAM.
Ugbu a, ị nwere ike jikọọ ya na kọmputa site na iji eriri USB site na FTDI modul. Nhọrọ ọzọ bụ jikọọ ya na arduino ozugbo, na-ejighi modul FTDI. Ma, ka anyị lee ikpe na FTDI nke ka mma maka ọtụtụ ikpe ...
na ihe ị ga-eso hazie na ịtọọ oge ihe niile iji rụọ ọrụ:
Iji bulite koodu na bọọdụ, ịkwesịrị jikọọ USB gị na PC.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịwụnye ESP32 n'ọbá akwụkwọ inwe ike irite uru na nke a. Maka nke ahụ, site na Arduino IDE gaa na Njikwa> Mmasị> N'ebe ahụ, n'ọhịa iji tinye URL, tinye: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json wee pịa OK. Ugbu a gaa Ngwaọrụ> Board> Board Manager> chọọ ESP32 wee pịa wụnye "ESP32 site na Espressif Systems".
Mepee IDE Arduino > Ngwaọrụ> Boards> họrọ AI-Thinker ESP32-CAM (ị ga-enyeriri addon ESP32 maka nhọrọ a ka ọ pụta na menu). Gaa na Ngwaọrụ> Port wee họrọ COM, ebe njikọ gị.
Ugbu a ị nwere ike bulite eserese na bọọdụ, iji mee ka ọ dị nfe, jiri otu ihe atụ lee Njikwa> Ihe Nlereanya> ESP32> Igwefoto> Igwefoto WebServer. Ozugbo emechara, mgbe ozi edere na ya nke ọma gosipụtara, wepu eriri si na GPIO pin 0 nke GND wee pịa bọtịnụ Tọgharia na bọọdụ ahụ.
N'ikpeazụ, ị nwere ike iji ma bido lee nsonaazụ ya na ntanetị weebụ ... Mgbe ị na-agba ya, ọ ga-enye gị na nyochaa URL nwere IP nke ị ga-etinyerịrị na ihe nchọgharị weebụ gị iji nweta. Site na ya ị nwere ike ịhazigharị akụkụ ya ma hụ ihe a hụrụ na igwefoto igwefoto.
O doro anya na ị nwere ike mee ọtụtụ ihe na-eji WiFi na ikike Bluetooth nke modul a. Cheta na oke bụ echiche gị. Lee, m na-egosi gị ngosipụta dị mfe ...
Ozi ndị ọzọ - Usoro Arduino n'efu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » ESP32-CAM: ihe ị kwesịrị ịma gbasara usoro a
A kọwara ihe niile nke ọma, mmemme ahụ na-ebukwa nke ọma, mana mgbe m degharịrị ESP32 iji chọpụta Wi-Fi na nyocha serial, ana m enweta otu njehie igwefoto mgbe niile:
Igwefoto E (873): Nchọpụta igwefoto dara na mperi 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND)
Ntinye igwefoto dara na mperi 0x105
Gịnị nwere ike ime?
O yikarịrị ka ọ bụ n'ihi njikọ modul igwefoto ma ọ bụ ọkụ na-adịghị mma.
Gbalịa nyochaa ihe abụọ ahụ.
BeagleV: SBC ọhụrụ bara uru maka mmepe ma dabere na RISC-V
Electroscope: esi eme ulo na ulo